Perception Kafeega - Joornaalka Naqshadeynta
Kafeega Maqaaxi yar oo diirran oo alwaax laga dareemayo kuna taal geeska laamiga dhexdiisa xaafadda deggan. Aagga u diyaargarowga furan ee dhexe wuxuu ka dhigayaa waayo-aragnimo nadiif ah oo ballaadhan waxqabadka barista ee martida meel kasta oo ah kursiga bar ama kursiga miiska ee maqaaxi laga cunteeyo. Shayga saqafka loo yaqaan "Shading geed" wuxuu ka bilaabmaa dhabarka aagga diyaarinta, wuxuuna daboolayaa aagga macaamiisha si uu uga dhigo jawiga guud ee makhaayaddan. Waxay siinaysaa saameyn aan caadi aheyn booqdayaasha sidoo kale waxay u noqotaa mid dhexdhexaad u ah dadka doonaya inay ku lumiyaan fekerka leh dhadhanka kafeega.
Magaca mashruuca : Perception, Magaca naqshadeeyayaasha : Haejun Jung, Magaca macmiilka : Perception.
Kafeega Haejun Jung Perception